खोज इञ्जिन अनुकूलन हेटर्स | Martech Zone
खोज इञ्जिन अनुकूलन हेटर्स
बिहीवार, जनवरी 28, 2010 शनिबार, अक्टोबर 31, 2020 Douglas Karr
यस साँझ म कसरी एक ग्राहक संग काम गर्दै थिए कसरी बढेको खोज इञ्जिन ट्राफिकको लागि तिनीहरूको ब्लग पोष्टहरू ट्वीक गर्न। यो कसरी अद्भुत हो कि शीर्षकको एक सानो समायोजन, मेटा वर्णन, हेडि itself वा सामग्री आफैंमा यो हुन सक्छ। हामीले पहिले लेखिएको ब्लग पोष्ट चयन गरेका थियौं, केही सामान्य समायोजन गरे, र प्राधिकरण ल्याब प्रयोग गरेर परिणामहरूको अनुगमन गर्नेछ।
धेरै डिजाइनर र वेब विकासकर्ताहरू छुट छ खोज इञ्जिन अनुकूलनको मान। चाखलाग्दो कुरा, तिनीहरूले एसईओ पेशेवरहरु मा बाहिर पटक। डेरेक पोवाजेकले भर्खर लेखेका थिए:
खोज इञ्जिन अनुकूलन मार्केटिंगको वैध रूप होईन। यो दिमाग वा आत्मा भएका मानिसहरूले लिनु हुँदैन। यदि कसैले तपाइँलाई एसईओ को लागी शुल्क लगाउँछ भने तपाइँ कनन गरिएको छ।
गर्नुहोस्। हैन विश्वास उनीहरु।
आउच म भएको छु बरु SEO पेशेवरहरूको शंकास्पद साथै ... यो तथ्यलाई पनि बोल्दै छ एसईओ पेशेवरले के गर्न सक्दछ धेरै तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग ज्ञानको अभाव छ, वा तपाईंसँग स्रोतहरूको अभाव छ, वा तपाईं एक प्रतिस्पर्धी खोज परिणाममा हुनुहुन्छ भने, एसईओ पेशेवरले सबै भिन्नता ल्याउनेछ।
मैले थप गर्नु पर्छ डेरेकको पोष्टमा केहि राम्रो सल्लाह छ, पनि:
केहि महान बनाउनुहोस्। मानिसहरूलाई यसको बारेमा भन्नुहोस्। यो फेरि गर्नुहोस्। त्यो हो। तपाइँमा विश्वास गर्ने केहि बनाउनुहोस्। यसलाई सुन्दर, आत्मविश्वास, र वास्तविक बनाउनुहोस्। सबै विवरण पसिना।
तर त्यसपछि उसले मलाई फेरि हराउँछ ...
यदि यसले ट्राफिक पाइरहेको छैन भने, यो पर्याप्त राम्रो थिएन। फेरि प्रयास गर्नुहोस्।
हुनसक्छ। हुनसक्छ? हुनसक्छ?!
डेरेकको विचारधाराले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ठूलो नोक्सानमा पुर्‍याउने छ। समस्या एसईओ पेशेवरहरूको हैन, समस्या आफै खोज इन्जिन हो। तपाईको एसईओ प्रोफेशनललाई विश्वास गर्नुहोस्, तपाईको खोज ईन्जिनहरूमा विश्वास नगर्नुहोस्! गुगलका कमजोरीहरूको लागि SEO पेशेवरहरूलाई दोष नदिनुहोस्।
गुगलको खोज इन्जिनको खोजशब्दहरू भन्दा परको विकासले यसको मद्दत गर्न थोरै गर्यो शुद्धता... यो मात्र एक भयो लोकप्रियता ईन्जिन… र कीवर्डमा भारी आधारित हुन जारी छ.
डेरेक गलत छ र हप्ता बिट लापरवाह ... robots.txt, पिंग्स, साईटम्यापहरू, पृष्ठ पदानुक्रम, कुञ्जी शब्द प्रयोग ... यो मध्ये कुनै पनि सामान्य ज्ञान हो। हामी क्लाइन्टहरूलाई सुधार गरिएको खोज इञ्जिन स्तर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछौं किनकि सर्च इञ्जिनको सीमितताका वरिपरि काम गर्न गाह्रो छ। मेरो एक सहकर्मीले यो यसरी वर्णन गर्दछ:
एसईओ कम्पनीहरु को रैंक मद्दत गर्दछ जहाँ तिनीहरु रैंक गर्नु पर्छ।
एसईओ मार्केटिंग वैध रूप होईन भन्ने तर्क मूल4पीको ... उत्पादन, मूल्य, पदोन्नति र बेवास्ता गर्दै छ नियुक्ति। प्लेसमेन्ट प्रत्येक महान मार्केटिंग अभियानको आधार हो! प्रत्येक इन्टरनेट सत्र को 90 ०% भन्दा बढिमा कसैले खोजी गर्दै… यदि तपाईंको ग्राहक प्रासंगिक खोज परिणाममा फेला परेन, तपाईं आफ्नो काम गरिरहनु भएको छैन। तपाईं खोज ईन्जिन प्लेसमेन्टको लागि इच्छा गर्न र आशा गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंले काम गर्न आवश्यक पर्दछ र… म भन्न आँट गर्दछु ... यसमा पसिना।
अमूल्य जानकारी र एक सुन्दर डिजाइन र को साथ एक कार्यात्मक वेब साइट निर्माण गर्दै छैन यसलाई खोजीको लागि अनुकूलन गर्नु भनेको अद्भुत रेस्टुरेन्टमा लगानी गर्नु, अद्भुत मेनु डिजाईन गर्ने, र तपाईंले यसलाई खोल्ने ठाउँमा हेरचाह गर्नु जस्तै हो। त्यो केवल अज्ञानी मात्र होइन, यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हो।
टैग: डेरेक पॉजाजेकहिरोइनएसईओSEO घृणा
मार्केटिंग बराबर टेक्नोलोजी छ?
Marketing ईमेल मार्केटिंग विज्ञलाई काममा लिने सिद्धान्तहरू
जनवरी 28, 2010 11:17 बजे